कमलको फूलबाट उत्पत्ति भएको स्वयम्भुको कथा – Suchana Hub
कमलको फूलबाट उत्पत्ति भएको स्वयम्भुको कथा
काठमाण्डौ । स्वयम्भुनाथ काठमाडौको डाँडामा रहेको चर्चित धार्मिक क्षेत्र मध्यको एक हो। यसलाइ तिब्बती भाषामा ‘फाग्स पा शिंग कुन’ भनिन्छ । स्वयम्भु काठमाडौंको पश्चिममा रहेको छ । यस मन्दिर एक पहाडको टुप्पोमा रहेको छ भने यो निकै प्रसिद्द बौद्ध मन्दिर (चैत्य) हो । स्वयम्भु पुराणका अनुसार सयौ बर्ष पहिले काठमाडौं उपत्यका एउटा ठूलो तालको रुपमा थियो जसबाट कमलको फूलको उत्पत्ति भएको थियो। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
भगवान मन्जुश्रीले पनि काठमाडौंको स्थापना गर्नु अघि यो भूमिमाई बसेर तपस्या गर्नु भयाको उल्लेखित पुरानो ग्रन्थहरूमी पाईन्छ। बैशाख पूर्णिमाको अर्थात् बुद्ध जयन्तीमा यहाँ निकै घुइंचो लाग्ने गर्दछ । स्वयम्भुनाथको स्तुपामा बुद्धका आँखाको चित्र कोरीएको छ भने आँखाहरुको बिचमा नाकको प्रतीक झल्कने गरि अंक १ पोतिएको छ। यो क्षेत्र अन्य बुद्धधर्माबलम्बी तथा हिन्दु धर्मावलम्बीको पनि गन्तव्य हुने गरेको छ।
Tags: #ताजा समाचार, #स्वयम्भु
Previous सपनामा आफु गर्भवती भएको देख्नुभयो? के हो संकेत ?
Next खतरनाक शार्कसँग भिडेर श्रीमतीको ज्यान बचाउने यी व्यक्ति